Ukusula kwabantwana-UJUAN JUAN
Iipesenti ezingama-75 zotywala
Ulusu oluthambileyo noluthambileyo lweebhokhwe zeentsana ziyayixabisa ifomula esekwe kwilothe yeAloe Vera
Icoca ngobunono kwaye igcina ulusu lweentsana luthambile kwaye lumanzi.
Iyafumaneka kwiindidi ezinje ngeepaki zokugcwalisa ezinevumba elimnandi, iipakethe zokugcwalisa ezingafakwanga nescent kunye neebhafu ezingafakwanga.
Ukusula kwethu umntwana kulungele zonke iimfuno zakho zomsebenzisi wokugqibela.
IJUAN JUAN wosula iintsana zilungele ukubekwa kwi:
Indawo yokukhathalela abantwana
Ukuqinisekisa ukuba umgangatho womntwana uyasula
Le nkqubo ilandelayo kufuneka iyimfuneko:
IACelli brand non ephothiweyo umatshini ilaphu isetyenziselwa ukwenza eli laphu ngoko umphezulu nkqu agudileyo. I-spunbond, i-spunlace, i-airlaid yengubo engalukwanga iya kuba yinto eqhelekileyo kwilaphu. Iphatheni leDot, ebhalwe nge-Embossed, eThe ngqo, eMnqamlezweni, eMesh, kwi-EF Texture iya kukhethwa njengohlobo olwahlukileyo lwelaphu elingasetyenziswanga elisetyenziselwa ukusula okumanzi kubandakanya ukusula kosana, ukusula izithambiso, ukusula utywala, ukubulala iintsholongwane, ukusula amakhaya, njl.
Inkqubo yokwenza ukusula okomileyo kufuneka kuthathe ixesha kwaye kuthathwe ngononophelo rhoqo. Ukuhambisa okokugqibela ukusula impendulo kuhlobo lwenkqubo yokulungisa iimela nokuba kungakanani na kunye nomgangatho weemela. Isingxobo semveliso esicocekileyo esizenzekelayo ngokuzenzekelayo.
Qiniseka ukuba izisuli ezisongiweyo kufuneka zilingane, hlengisa umgca ngamnye welaphu ngendlela ethe tye kubalulekile.
b.Umgama osisiweyo womgca wokusula kwipleyiti esembindini kunye nonxibelelwano lwelaphu phakathi kwemiqulu nganye akufuneki uvalwe.
c. Ukupakisha okuthambileyo kufuneka kususwe macala omabini.
d. isiciko kunye nesincamathelisi kufuneka zicofwe kakuhle kwisikhwama sosula.
e Umahluko phakathi komatshini wamaTshayina kunye nomatshini waseJamani kukuchaneka kwepleyiti esongiweyo.
Ifomula yokuhambisa amanzi ngamanzi acocekileyo anyangwe yinkqubo yonyango ye-RO kufuneka yenziwe ngokufanelekileyo, kwaye itywina lepakethi ethambileyo kufanelekile ukuba ilungele ukumanzisa iipeyinti, kungenjalo, ukusula kuya kuba tyheli kwaye iintsholongwane ziya kuba sisiphumo.
Ukupakisha nge-BPA simahla kuya kubaluleka ekususeni i-eco-friendly yosana, kwaye uqiniseke ukuba ulwelo lugcinwa ixesha elide kangangoko kunokwenzeka kwisingxobo sosula a. Yonke ifilimu yealuminium isetyenziselwa ukupakisha. b. inkqubo yokutywina kwimveliso yokusula emanzi ibalulekile. (umzekelo: amacala amathathu etywina okanye amatywina amacala ama-4)
Qiniseka ukuba umgangatho kunye nokusula okumanzi kubalulekile, kodwa imveliso nayo ibalulekile
Zingaphi indawo ekufuneka sizilungisile ukwenza amaqhekeza amanzi asisigidi?
I-1000 m3 ifanele ilungiselelwe ukugcina impahla eluhlaza (ibandakanya i-master roll yelaphu kunye nebhokisi yebhokisi, ifomula / utywala, njlnjl) kunye ne-1200 m3 kufuneka ilungiswe kwisitokhwe seemanzi ezimanzi esele zilungile ukuba zingalayishwa kwizikhongozeli.
Ukulandela kukuchazwa kwemodeli nganye
Cts ezingama-50 ipakethi
I-80 Cts ipakethi
I-100 yeekati ipakethi
Ipakethe yeCase 40 40
UBungakanani bephepha 15x20 6 "x8"
CASE Ubunzima 13kgs 28.6lbs
ICALA Ubukhulu I-53x34x17cm 21.2 "x13.6" x6.8 "
UNIT Ubunzima 0.3kgs 0.66lbs
Imilinganiselo yeUNIT 20x10x3.5cm 8 "x4" x1.4 "
Ipakethe yeCase 24 24
CASE Ubunzima 16kgs 35.2lbs
ICALA Ubukhulu 43x34x25cm 17.2 "x13.6" x10 "
UNIT Ubunzima 0.49kgs 1.078lbs
Imilinganiselo yeUNIT 20x10x4.5cm 8 "x4" 1.8 "
CASE Ubunzima 19kgs 41.8lbs
ICALA Ubukhulu 43x34x22cm 17.2 "x13.6" x8.8 "
UNIT Ubunzima 0.61kgs Iilitha ze-1.342
Imilinganiselo yeUNIT 20x10x5.5cm 8 "x4" 2.2 "
I-FAQ yokusula iintsholongwane:
I-1.MOQ yokusetyenziswa kwento yokusula i-sanitizing, i-pouch sipe wet, i-canister wipes emanzi, njl.
Akukho sicelo se-MOQ, kodwa ngesiqhelo i-40HQ iya kuba yeyona ingcono kwezoqoqosho ukonga iindleko zokuhamba.
2.Can singathenga ukosula okwomileyo kunye nebhokisi ngaphandle kwelebheli yabucala?
Ngokuqinisekileyo, thenga ukosula okwomileyo kunye nebhokisi kwaye emva koko ugcwalise ulwelo kwindawo oya kuyo iya kugcina iindleko zothutho kunye nerhafu yokungenisa elizweni, njl.
3.Kuba ingaba ibhokisi inokwenziwa ngentando yakho?
Ngokuqinisekileyo, ibhokisi eyenziwe ngokwezifiso iyamkelwa, kodwa iindleko zokubumba kufuneka zixoxwe
4. Nokuba ngaba ilaphu elingalukanga lingenziwa ngemeko
Ngokuqinisekileyo, kodwa i-qty yengubo yomyalelo kufuneka ifike kwi-150T, okanye iindleko zokubumba kufuneka zihlawulwe.
5.Yintoni ilaphu elinokutsha?
Ngokwesiqhelo ilaphu lomthi wokhuni + I-viscose kunye ne-bamboo pulp + Viscose, sibiza ilaphu elinokutsha
6.Yintoni ilaphu ebolayo?
Ngokwesiqhelo i-100% Viscose, siyibiza ngelaphu ebolayo
7.Wenza ntoni umntu ukwenza umqhaphu kunye necotton cotton?
Umntu wenze umqhaphu sisebenzisa iRayon okanye iViscose, kodwa ikotoni yendalo ngumqhaphu wendalo kwizityalo.
8.Kutheni umgquba ofanayo wezinto eziluhlaza ezingalukwanga, kodwa ukuchukumisa kunye nokuziva kwahlukile
Jonga ingxelo yovavanyo lwelaphu, umthamo wokumilisela / ukuqina / ubungakanani bohluke ngokupheleleyo, kwaye i-ES fiber kufuneka ilawulwe kakuhle, ngokusekwe kwinyaniso, kwinqanaba eliphezulu lomatshini liya kuchaza umgangatho welaphu.
9.Kutheni ukuhanjiswa kwexesha lokususa kungahambi kakuhle?
Umgangatho welaphu awonelanga (jonga kunombolo 8) b. Ulwabiwo kunye nomgangatho weemela awonelanga kumatshini wokusula omanzi.
10.Yintoni imathiriyeli yentsimbi?
Inkonkxa yenziwe iHDPE ngokubumba okuvuthuzayo, isiciko senziwe nge-PP ngenaliti yokubumba.
11.Zingaphi iipakethi / ii-canisters ezinokufakwa kwi-40HQ?
I-Qty kufuneka ibalwe ngokusekwe kwindlela eyahlukeneyo yokupakisha (umzekelo, i-12 canister / ctn okanye i-24 canister / ctn)
Egqithileyo Ukusula izithambiso
Okulandelayo: Iipesenti ezingama-75 zotywala
Lwedilesi: No.20 ZhaoYu Road, FuWan Industrial Centre, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China